Maxaa Farqi ah oo U dhaxeeya Farmaajo iyo ina Iley? Dhageyso Barnaamij Gaar Ah.
Thursday September 07, 2017 - 13:48:29 in Wararka by Super Admin
Dad badan oo hurdayay ayaa indhaha kala qaaday markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Muqdisho ka dhigay seylad lagu iibiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee diidan in ay gumeysi ku hoos noolaadaan amaa la dagaalama.
Farmaajo ayaa dhawaan dowladda Itoobiya ka gatay sarkaal katirsan jabhadda ONLF ee dhulka Soomaali galbeed kula dagalaanta dowladda itoobiya ee gumeysato.
Waxa ay bar bar dhac noqdeen ama isku mid noqdeen madaxweynaha dhulka soomaaliyeed ee Itoobiya gumeysato Cabdi Maxauud Cumar (ina iley) kaasoo Jig jiga iyo dhulka hoos taga dadka Soomaaliyeed ee Itoobiyaan diidka ah ka aruuriya una gacan geliya saraakiisha tigreega.
"Kol haddii madaxweynaha dowladda federaalka ah Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ina iley midba meel itoobiya uga ugaaranayo oo muwaadiniinta soomaaliyeed ee gumeysigeeda diidan ay ka dhigayaan mid ay dilaan iyo mid ay asigoo nool oo jeebeysan u dhiibaan ma jiraan wax aanu labadood ku kala saari karno”ayay Aqoonyahanno ka sheegeen Barnaamij ka baxay Idaacada Alfurqaan.
Aqoon yahanada ayaa sheegaya in dhulka alshabaab maamusho mooyee meel kale oo ruuxa Soomaaliga ahu maanta cadawgiisa uga bad baadayo aan la arag.
Halkan ka dhageyso Barnaamijka oo dhameystiran MP3